नर्सको आन्दोलनमा रञ्जु दर्शनाको समर्थन
माघ २, २०७४ बुधवार ०१:१०:००
काठमाडौं– नर्सहरुले देशव्यापी रुपमा गरिरहेको आन्दोलनमा चर्चित युवा नेत्री रञ्जु दर्शनाले समर्थन जनाएकी छिन् । दर्शनाले यो आन्दोलनप्रति सवैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘साथीहरु म यो पोष्ट लेख्दैछु । ताकि तपाईं हामी सवै...
मेराे पनि श्रम शाेषण भएकाे छ : नितु खड्का,नर्स [भिडियो]
माघ २, २०७४ बुधवार ००:४२:००
काठमाडौं– नेपाल नर्सिङ एशोसियसनले आव्हान गरेको आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी छिन् नर्स नितु खड्का । गुणराज पाठक मेमोरियल कलेज काठमाडौंबाट पिसिएल नर्सिङ गरेकी उनी अहिले बिएन पढिरहेकी छिन् । पिसिएल सकेपछि उनले विना पारिश्रमिक काम गर्नुपरेको सुनाइन् । उक्त समय आ...
शिक्षण अस्पतालमा त शोषण छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला ? [भिडियो]
माघ २, २०७४ मगलवार २२:०४:००
काठमाडौं– बिगत २२ वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालमा नर्सिङ सेवा दिइरहेकी छिन् नारायणी गौतम । नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाईमा भइरहेको आन्दोलनमा उनी पनि सहभागी छिन् । मंगलवार महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा भेटिएकी उनले नर्समाथि भइरहेका विभेद र श्रम शोषण देखेभोगेकी छिन् । त्...
नर्सको आत्मसम्मानको लडाइँलाई निर्णायक बनाऔं
माघ २, २०७४ मगलवार २१:३३:००
नेपाली नर्सिङ समुदाय यतिबेला आन्दोलनमा छ। पेशामा रहँदा वर्षौंदेखि मनभित्र गाँठो परेर बसेका पीडा बिस्तारै पोखिँदै छ। राजनीतिक र बाहिरी दबाबका बीच पनि नर्सहरु स्वत:स्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा निस्किएका छन्। हरदम बिरामीको सेवामा दत्तचित्त भएर खट्ने हामी नर्सहरु यस पटक आफू...
माग पूरा नभए इमर्जेन्सी सेवा पनि बन्द गर्छाैं– अप्सरा पाण्डे, उपाध्यक्ष नर्सिङ संघ [भिडियो ]
माघ २, २०७४ मगलवार २०:४७:००
काठमाडौं– नेपाल नर्सिङ संघले अघि सारेका माग पूरा नभए नर्सहरुले इमर्जेन्सी, आइसियू र सिसियू छाडेर आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । एक हप्तादेखि आन्दोलित नर्सहरुका मागलाई गम्भीर रुपमा नलिइए अप्रिय परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष अप्सरा पाण्डेले बताएकी...
माघ २, २०७४ मगलवार १७:२२:००
म एक नर्स । त्यसैले मेरो सामाजिक सञ्जालमा अधिंकास साथी नर्स दिदिबहिनीहरु तथा अग्रजहरु हुनुहुन्छ। यही कारणले मेरो फेसबुकमा नर्सिङ क्षेत्रकै पोष्ट देखिरहन्छन्। एकदिनअघि एक जना बहिनीले आफ्नो तर्क राखेर एउटा समाचार सेयर गरेकी थिइन्। शिर्षक थियो "एक जना नर्सको बि...
नर्सको आन्दोलन : स्वास्थ्य मन्त्रालय यति संवेदनाहीन हुन सुहाउँछ?
माघ १, २०७४ मगलवार ०१:२७:००
नेपाल नर्सिङ संघको आह्वानमा नर्सहरु शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएको ६ दिन भइसकेको छ। आफूमाथि भइरहेका अन्याय, विभेद र श्रम शोषणका विरुद्ध बाध्य भएर हामी देशभरका नर्स आन्दोलित हुनुपरेको हो। हामीले ११ वटा माग राखेका छौं, जुन जायज छन्। मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा, मन्त्...
माघ १, २०७४ सोमवार २०:४९:००
काठमाडौं– आन्दोलनरत नर्सहरुले सोमबारदेखि एक सिफ्टको ड्युटी छाडेका छन्।एक हप्ताअघि ११ बुँदे माग अघि सार्दै उनीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनीहरुका मागको सुनुवाइ नगरेपछि पूर्व कार्यतालिका अनुसार सोमबारदेखि तीन दिनसम्म उनीहरुले १...
ड्युटी छाडेर नर्स किन अान्दाेलनमा ? ( भिडियो वार्ता)
पुस ३०, २०७४ आइतवार २१:३५:४३
नेपाल नर्सिङ संघको अगुवाइमा अहिले देशभरिका नर्स आन्दोलनमा छन्। कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु गरेका उनीहरु तीन दिनदेखि एक घन्टा ड्युटी छाडेर निस्किरहेका छन्। सोमबारदेखि एक सिफ्ट नै छाड्ने नर्सहरुको आन्दोलनको पूर्व कार्यतालिका छ। यति गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभए २४ घन्ट...
देशभरका नर्सहरु कालोपट्टी बाँधेर काममा (फोटोफिचर)
पुस २७, २०७४ बिहिवार १६:१८:००
काठमाडौं- देशभरका नर्सहरु अन्दोलित भएका छन्। घोषित आन्दोलन तालिका अनुसार बिहीवार पनि हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरुले सेवा दिइरहेको नर्स दुर्गा सापकोटाले जानकारी दिइन्। नेपाल नर्सिङ संघको अव्हानमा देशभरिका नर्सहरु आन्देलित भएका हुन्। ११ बुँदे माग...
नर्सहरुद्वारा कडा आन्दोलन घोषणा, २४ घन्टा ड्युटी छाडेर मन्त्रालयमा धर्ना दिनेसम्म
पुस २६, २०७४ बुधवार १८:३७:००
काठमाडौं– नर्सहरुले कडा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । मंगलवार ११ बुँदे माग अघि सार्दै उनीहरुले आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। तालिकाअनुसार पुष २६ र २७ गते कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिने र पुस २८, २९ र ३० गते सवै अस्पताल र शैक्षिक संस्...
किमोथेरापी गर्ने नर्समा हुनुपर्ने गुण
पुस २२, २०७४ शनिवार १७:००:११
क्यान्सरको उपचार गर्न प्रयोग गरिने प्रविधिमा किमोथेरापी पनि हो । किमोथेरापी भनेको विशेष प्रकारको औषधिबाट क्यान्सरको उपचार गर्ने प्रक्रिया हो । हरेक किमोथेरापीका औषधिको प्रयोग गर्ने तरिका फरक–फरक हुन्छन् । कुन केमोथेरापी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय क्यान्सर...
नर्समाथिको अन्याय सहेर नबसौं
पुस २०, २०७४ शुक्रवार ००:५३:००
नर्सिङ आफैंमा एउटा गरिमामय पेशा हो। बिरामीको सेवादेखि लिएर समुदायमा गएर नेतृत्ववहन गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने क्षमता हामीमा छ। नर्सिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अनि माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका जनशक्ति थपिँदो क्रममा छन्। यो आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। हिजो 'रातबि...
नर्सहरु, यतिबेला बोलेनौं भने कहिले बोल्ने, अब पनि लडेनौं भने कहिले लड्ने?
पुस १९, २०७४ बिहिवार ०१:१६:००
हामीले नर्सिङ क्षेत्र रोज्यौं। किनकि फ्लोरेन्स नाइटिंगलबाट प्रभावित भयौं। जसले युद्धको अँध्यारोमा पनि सेवाको उज्यालो छरिन्। त्यो बाटो पछ्याइरहँदा हामीले कहिल्यै आफ्नो लागि सोचेनौं। बिरामीको दुखाइमा मल्हम लगाइरह्यौं। बिरामीका घाउ सन्चो बनाउन जुटिरहँदा पछिल्लो समय...
मंसिर १९, २०७४ मगलवार १६:३५:१२
कस्मेटिक नर्सिङ मानिसको सुन्दरतामा निखार ल्याउने पेसा हो । यद्यपि, नेपालमा पिसिएल, बिएससी, एमएससी नर्सिङ पढाइ हुन्छ तर कस्मेटिक नर्सिङ पढाइ हुँदैन। कस्मेटिक नर्सहरुले अस्पताल, मेडिकल स्पा, प्लास्टिक सर्जरी हुने संस्थामा काम गर्न सक्छन् । कस्मेटिक नर्स बन्नका लागि कस्मेटिक ...
नर्सहरुले विरोध गरेपछि रोकियो मिस नर्स चितवन
मंसिर १६, २०७४ शनिवार २१:२६:१०
चितवन– चितवनमा रहेका नर्सहरुबीच हुने सौन्दर्य प्रतियोगिता भइरहेको ‘मिस नर्स चितवन’ नहुने भएको छ । यसपल्ट उक्त प्रतियोगितालाई ‘मिस पिस चितवन’ बनाउने सहमति भएको छ। आगामी दिनमा नर्स जोडेर यस्ता प्रतियोगिता नगर्ने...
पिसिएल नर्सिङ तेस्रो वर्षमा ९५.८ प्रतिशत उत्तीर्ण
मंसिर १४, २०७४ बिहिवार २३:५१:५६
काठमाडौं– पिसिएल नर्सिङ तेस्रो वर्षको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्रले गत साउनमा भएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यसपल्ट समग्रमा उत्तीर्णदर ९५.८ रहेको छ । धेरै कलेजले शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण गराउन सफल भएका छन् । न...
मंसिर १४, २०७४ बिहिवार १५:३५:५७
काठमाडौं– नर्सहरुबीच हुने सौन्दर्य प्रतियोगिता 'मिस नर्स चितवन' कार्यक्रमप्रति नर्सहरुले विरोध जनाएका छन्। नर्सिङ जस्तो सेवामूलक पेशामा रहेकाको सौन्दर्य मापन गर्न खोजिएको भन्दै नर्सहरुले विरोध जनाएका हुन्। नर्सहरुको छाता संगठन नेपाल नर्सि...
नर्सिङ सेवामा २०३६ सालकै दरबन्दीले कहिलेसम्म काम गर्ने?
मंसिर १३, २०७४ बुधवार २३:५३:१९
सरकारले मापदण्ड अनुसार नर्सको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। छ्यापछ्याप्ती खुलेका नर्सिङ कलेजबाट उत्पादित नर्स नै अझै बेरोजगार छन्। फेरि क्षमताविहीन नर्स उत्पादन गरिरहँदा उनीहरूको काम र सेवाको गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठ्छ। नर्सको काम र सेवाको गुणस्तरीयता खस्कन नदिन सरकारले...
मिस नर्स चितवनको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा १३ नर्स उत्रिँदै
मंसिर १३, २०७४ बुधवार २१:०९:३८
चितवन– मिस नर्स चितवनको दोस्रो संस्करणको अन्तिम प्रतिस्पर्धा मंसिर १७ मा हुने भएको छ। मिस नर्स २०१७ मा ३० जना नर्स सहभागी भएकामा १३ जना अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका छन्। भिन्न समयमा उनीहरुलाई व्यक्तित्व विकाससँगै, अन्य सीप तथा तालिम दिएर फाइनल प्रतिस्पर्धाका लाग...